Wararka - 2019 ee Qaahira, Masar (mashiinka waraaqaha sameeya)
Qorax kulul iyo isku darsiga carbeed ee dahsoon.
Waxaan raacnay kooxdii bandhigga waraaqda Bossing oo galay Qaahira oo qurux badan.
Gelitaanka Masar waa iid indhaha, safar gabay ah.
Waxaa jira Ahraamyo dahsoon, fircoonnadii hore iyo muuqaal qurxoon oo ku teedsan webiga Niil.
Si kastaba ha noqotee, waxa aad nooga sii farxiya ayaa ah xirfad ahaanta bandhigga samaynta waraaqaha.
Intii lagu gudajiray bandhigga, waxqabadyo taxane ah oo leh mawduucyo kaladuwan ma hagaajin karaan oo keliya tayada xirfadeed ee soo-booqdayaasha waxayna kordhin karaan tirada xirfad-yaqaannada soo-booqdayaasha ah ee wax-ku-oolka ah, laakiin sidoo kale waxay sare u qaadi karaan is-weydaarsiga iyo iskaashiga u dhexeeya shirkadaha waraaqaha iyo soo-bandhigayaasha dalal kala duwan intii lagu jiray bandhigga.
Isla mar ahaantaana, shirkadaha sameeya waraaqaha iyo qalabkooda kor, alaabta ceyriinka ah, kiimikada, alaab-qeybiyeyaasha si otomaatig ah u maamula si ay u dhisaan barxad isgaarsiineed.
Intii uu socday bandhigga, waxaa la qabtay is-weydaarsiga tiknoolajiyada sameynta waraaqaha iyo aqoon-isweydaarsiyo, iyo sidoo kale casho is-weydaarsi, taasoo u abuureysa dhacdo weyn warshadaha sameynta warqadaha ee Bariga Dhexe.
Waqtiga boostada: Sep-05-2020